जन्मिएको एकवर्ष पछि वडा अध्यक्षले गराए बच्चाको न्वारन | PBM News.com
कालिका १९ साउन । कालिका नगरपालिकाको वडा नं. ५ स्थ्ति प्रेमप्रसाद पौडेलको कान्छो छोराको आइतवार न्वारन गरिएको छ । दलितसँग उठवैश भएको भन्दै घरमा पंण्डित आउन नमानेपछि कान्छा छोराको न्वारन हुन सकेको थिएन । १ वर्ष ३ दिनको दिन वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष जिएन महतोको पहलमा न्वारन गरिएको हो । दलितकी चेली पौडेलका जेठा छोराले लिएर भागेका कारण समाजबाट बहिष्करणमा परेको शिर्षकमा समाचार सार्वजनिक भएपछि वडा अध्यक्ष लगायत स्थानीयले चासो दिएपछि उनको न्वारन भएको हो । वडा अध्यक्ष महतो आफैले पंण्डित हेमप्रसाद भट्टराईलाई बोलाएर न्वारन गराएका हुन् ।
समाजले आफुलाई पनि नराम्रो भन्ने त्रासले पंण्ति भट्टराई सहज तरिकाले यो घरमा नित्यकर्मका लागि आउन नसकेको बताउनुभयो । आईतवार दिनभर उनको घरमा चहल पहल थियो । धुमधामले नै न्वारन गर्ने काम भयो । न्वारन कार्यक्रममा स्थानीयहरु पनि सहभागी भए । पौडेलका छिमेकीहरु दलित समुदायका छन् । दलितहरु पनि न्वारन कार्यक्रममा उपस्थ्ति थिए ।
पौडेलकी धर्मपत्नी चण्डीका पौडेलले आफ्नो इच्छा पुरा भएको बताईन् । घरमै आएर पंण्डितले छोराको न्वारन गरिदियोस भन्ने उनको चाहना थियो । – “ मेरो इच्छा पुरा भयो ” उनले भनिन् ।
तर स्थानीयले भने पौडेल परिवारलाई समाजले बहिस्कार नगरेको बताउँछन् । प्रेम प्रसाद पौडेलकै कारण छरछिमेकहरु यिनको घरमा आउत–जाउत बन्द भएको उनीहरुको भनाई थियो । अत्याधिक मदिरा सेवन गरेर मनलाग्दी बोल्ने गरेका कारण छरछिमेकहरु पौडेलको घरमा आउन नसकेको गढीमाई टोल विकास संस्थाका पूर्व अध्यक्ष दण्डप्रसाद उपाध्यायले बताए । समाजले विभेद नगरेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
प्रेम पौडेल आफैले दलितको चेलीलाई बुहारी बनाएर घरभित्र्याउन नचोहको गढीमाई टोल सुधार समितिका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताए । यिनीहरु आफैले जातिय विभेद गरिरहेको अध्यक्ष पौडेलको आरोप छ । –“ यिनका जेठा छोराले भागेर विहेगरेको दलितकी चेलीलाई बुहारी बनाएर भित्र्याउन यो परिवार नै तयार छैनन –” अध्यक्ष पौडेलले भने ।
कालिका नगरपालिकाको वडा नं. ५ भीमपुर बस्ने प्रेमप्रसाद पौडेलका जेठा छोराले परियार थरकी युवतीसँग भागेर विवाह गरेको वर्षदिन बढी भयो । पौडेलका तीनभाइ छोरा छन् । जेठा छोरा सुजन पौडेलले घर नजिकैकी अस्मिता परियार सँग भागी विवाह गरेका थिए । परिवारले घरभित्र्याउन नमानेपछि भरतपुरमा डेरा गरी बस्दै आएका छन् । ((०))